Tun Tun's Photo Diary: Festive light-up for Marina Bay Sands with David Beckham
Mamma Mia ဖျော်ဖြေ ပြီးတော့ ကလေးတွေ Chirstmas သီချင်းဆိုပါတယ်။ ပြီးတော့ David Beckham ထွက်လာပါပြီ။ David Beckham က အပြင်မှာလဲ အင်မတန် ကြည့်လို.ကောင်း ပြီး အရမ်း smart ကျတဲ့ သူလို. ပြောရမယ်။
ကျွန်တော်ရပ်နေတဲ့ ဘက်ကကြည့်ရင် MBS's CEO က Beckham ကို ကွယ်ပြီး ရပ်နေလို. ကျွန်တော့် ဘေးက လူကတောင် သူ.ကို မေတ္တာပို.နေကြပါသေးတယ်။ သူကွယ်နေတော့လဲ ဘေးနားက TV screen ကို ပဲ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ရတာပေါ့။
MBS CEO နဲ.စကားတွေ ပြောပြီး Beckham က ဟောဒီ Christmas လက်ဆောင်ဗူးကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ VIP ဧည့်သည်တွေကို နူတ်ဆက်ပြီး ထွက်ခွာသွားပါတယ်။
Beckham ပြန်သွားတော့ လူတွေ တော်တော်များများ ပြန်သွားကြပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်အနေနဲ. Clara Helms (Australia's Got Talent Final list) သီချင်းဆိုပါတယ်။ သီချင်း ၅ ပုဒ်လောက်ဆိုပြီး အခမ်းအနား ကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
Date Taken : 2014-Nov-15
at 11/15/2014 11:14:00 PM